ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: စာပေလုပ်အား
၀မ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ် မောင်မျိုးရေ ...
အမှတ်တရ စကားပြောရင်း ဟိုက ယား၊ ဒီက ယားနဲ့ နေရခက်နေတဲ့ မောင်မျိုးပုံကို မြင်ယောင်နေမိတယ်။ :))
မောင်မျိုးရဲ့ စာပေလုပ်အားဆု က စေတနာရဲ့ ရောင်ပြန် အကျိုးသက်ရောက်မှုပဲ နော် ...
ရှေ့ဆက်ပြီးလဲ စာပေကောင်းကျိုးအတွက် အများကြီး သယ်ပိုးစွမ်းဆောင်နိုင်ပါစေ ... ။
congratulation mg myo
မောင်မျိုး ကွး)))
ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပီး နင့်အဘနဲ့ အမေကို ပြရမှာ .. :D
စာပေလုပ်အားဆုအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ် မောင်မျိုးရေ။ ဂျာနယ်လေးဖိုးသက်ရှည်ရဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတွေ ဖတ်ချင်သေးတယ်။ ဒီထက်အဆပေါင်းများစွာ ရေးသားဖြန့်ဝေနိုင်ပါစေနော်။ စိတ်ဓာတ်အစဉ်ကြည်လင်အေးမြပါစေကွယ်။
ဂုဏ်ယူမိပါတယ် အကို... ထပ်တူထပ်မျှလည်း ပျော်ရွှင်မိတယ်... အစ်ကို့ရဲ့ ရိုးသားမှု့ထင်ဟပ်နေတဲ့ စကားလုံးတိုင်းကို အရမ်းသဘောကျမိတယ်။ Congratulation!
စာတစ်ပုဒ်၊ တစ်ပုဒ်ရေးဖို့ ခက်ခဲတတ်တာ ကိုယ်တွေ့မို့ အခုလို စာမူတွေ အများကြီးရေးပြီး ပုံမှန်ပါဝင်တဲ့ ညီက ဒီဆုနဲ့ တကယ်ပဲ ထိုက်တန်ပါတယ်၊ ဆုပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ စာကြောင်းလေးတွေကလည်း ရှေ့ဆက်ဖို့ ခွန်အားဖြစ်စေမှာ အသေအချာပါပဲ...။ ညီ့အတွက် တကယ့်ကို ဝမ်းသာမိပါတယ်ဗျာ...။
ဂုဏ်ယူပါတယ်ညီ... ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမျာကြီး လုပ်မပေးနိုင်ဘူး ဆိုပြီး အားငယ်မနေနဲ့ ခုလောက်လုပ်နိုင်တာကိုက လူအများကြီးထက် သာနေပြီ... ညီ့လောက် စာပေအကျိုးကို မသယ်ပိုးပေးနိုင်တဲ့ လူတွေ အများကြီးပါ... ဒီဆုလေးက ညီ့ရဲ့ စာပေအကျိုးသယ်ပိုးချင်စိတ်ကို တွန်းအားပေးနေမှာပါ...
ရိုးသားမှုတစ်ခုနဲ့ စာပေလုပ်အား ပြုခွင့်ရချင်တဲ့ဆန္ဒ ပြည့်ဝပါစေ..
ပထမဆုံးရတဲ့ဆုက စာပေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဆုဖြစ်တာ ဘယ်လောက်ဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းလဲ မောင်မျိုးရေ
wow ... Congratulation Mg Myo ... So happy to read your post. Please be continue writing. (Sorry for no MM font)